पेट्रोल बेच्न नमान्नेलाई सर्पको प्रहार ! – Sanchar Patrika
पेट्रोल बेच्न नमान्नेलाई सर्पको प्रहार !
August 1, 2020 143
कोहि मानिसले कुनै पनि सामग्री बेच्न इन्कार गर्याे भने के गर्नुहुन्छ ? केहि रिस त उठ्ला तर उसलाई हानी पुर्याउनुको सट्टा अर्काे पसलबाट सामान किन्न गइएला । तर के कोहि मानिसले सामान बेच्न इन्कार गर्याे भने उसको कोठामा सर्प छाडेर कोहि भाग्ला ? लकडाउनका बीचमा यस्तै एक अनौठो घटना भएको छ, भारतमा ।
Prevभर्खरै।नारायणगढ–मुग्लिन सडक बाट आयो-दुखद- खबर
Nextकाठमाडौं कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमतर्फ, यी हुन् १० गल्ती